International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ ။ အလုပ်သမားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်လိုသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ ။ အလုပ်သမားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်လိုသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့
"အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ မူဝါဒကျင့်သုံးတာက အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်သမား အများအပြားအတွက်တော့ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတွေ ဆုတ်ယုတ်ကုန်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က ပိုမြင့်လာတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေပြည့်အောင် အခိုင်းခံရပြီး ဖိအားဒဏ်ခံရတာတွေ ပိုများလာတယ်။ အလုပ်ရှင်တွေကဖိအားပေးတာ ပြင်းသထက်ပြင်းလာတယ်"ဟုယခုအစီရင်ခံစာအတွက် ရှေ့ပြေးအသံ၏ သုတေသနမိတ်ဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သော အလုပ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့မှ ကိုသူရိန်အောင်က ပြောသည်။ "အဲဒါကို ထပ်ဆောင်းလိုက်တာက လူနေမှုစရိတ်တွေနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာတာတွေ၊ အဲဒီတော့ အခြေခံလစာမြင့်လာပေမယ့် သူတို့ရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းက မြင့်မလာဘူး" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
"အနိမ့်ဆုံးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ" ကို အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများအပြင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂဝင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူများ စသည့် အခြားသက်ဆိုင်သူများတို့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အပေါ် အခြေခံထားသည်။ ရန်ကုန်တစ်ဝိုက်ရှိ စက်မှုဇုန်ုများကို အဓိကအာရုံစိုက်ထားပြီးပုသိမ်၊ ပဲခူးနှင့် အင်းတကော် တို့လည်းပါဝင်သည်။
အစီရင်ခံစာတွင် သမဂ္ဂများ၌ လွတ်လပ်စွာပါဝင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာသမဂ္ဂတည်ထောင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်သည့် အလုပ်သမားဥပဒေ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်ပြထားသည်။ "စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေအတွက် ခုံသမာဓိကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မလိုက်နာဘဲ ဥပေက္ခာပြုဖို့သိပ်လွယ်တယ်" ဟု အလုပ်သမားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီရေးအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ကိုပြည်ပိုင်ကိုကို (ခ) ကိုသစ်မှ ပြောသည်။ "ဒီတော့ တကယ်လို့ စက်ရုံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်က အလုပ်သမားတွေကို သမဂ္ဂထဲပါလို့ အလုပ်ထုတ်ရင်၊ ခုံသမာဓိကောင်စီကလည်း အဲဒီအလုပ်သမားတွေကို ပြန်ခန့်ဖို့ စက်ရုံပိုင်ရှင်ကိုအမိန့်ချရင် စက်ရုံပိုင်ရှင်က ဒဏ်ငွေနည်းနည်းလောက်ဆောင်ပြီး ခုံသမာဓိကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲနေလိုက်ဖို့ကပိုလွယ်နေတယ်။"
မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှ အလုပ်သမား ၉၀% ကျော်မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်နေသဖြင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေး အာမခံပေးရန်လည်း အထူးလိုအပ်နေသည်။ အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲတွင် မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏ ကွန်ရက်နှင့် မဟာမိတ်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် တာဝန်ခံဖြစ်သူ မသွယ်ဇင်တိုး က "မီးဖွားခွင့်ကို ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းပေးထားပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ မီးဖွားခွင့်မယူနိုင်ကြဘူး။ ဒါတင်မက အမျိုးသမီးအလုပ်သမား အများစုအတွက် အိုဗာတိုင် အခိုင်းခံရတဲ့အခါ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာတွေကို ဖြတ်ပြီး နောက်ကျမှ အိမ်ပြန်ရတာ ခဏခဏဖြစ်နေတော့ သူတို့အတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခံရဖို့၊ အကြမ်းဖက်ခံရဖို့ လွယ်နေတယ်" ဟုပြောသည်။
"ဒီဖွဲ့စည်းမှုဖိအားတွေအရ အစိုးရဟာ ဥပဒေကိုပြင်ပြီး ပြည်သူဗဟိုပြုအလုပ်သမားမူဝါဒကို ကျင့်သုံးဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမူဝါဒဟာ စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်လောက်အောင် ကျစ်လစ် ခိုင်မာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှခုလို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဝင်ရောက်တဲ့ အရေးကြီးဆုံချက်ကာလမှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာ အရှည်တည်တံ့ခိုင်မာထွန်းကားနိုင်မှုရဲ့ စံနမူနာအဖြစ် အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်မှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး သာတူညီမျှဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့လည်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရပါမယ်" ဟု ရှေ့ပြေးအသံ၏ ယာယီတာဝန်ခံ ကိုအောင်ခိုင်မင်းကပြောသည်။
အောင်ခိုင်မင်း၊ ယာယီတာဝန်ခံ၊ ရှေ့ပြေးအသံ +၉၅ (၀) ၉၂၆ ၁၀၀ ၉၉၉၅၊ akm@progressive voice.org (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။
"ရှေ့ပြေးအသံ" သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လို "Progressive Voice" သည် မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အသွင်ကူးပြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အခွင့်အရေးအခြေခံ မူဝါဒသုတေသနနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
For immediate release 1 December, 2016
"While the introduction of the minimum wage wasavictory for the actions taken by workers, for many working conditions have deteriorated, as they are forced to meet bigger production targets and feel more pressure as they are pushed harder and harder by their employers," said Ko Thurein Aung, Director of Action Labor Rights,aresearch partner of the Progressive Voice for this report. "Added to this is the rise in living costs and commodity prices, meaning that despite increases in their basic wage, their quality of life does not improve," he continued.
The report, "Raising the Bottom: A Report on the Garment Industry in Myanmar," is based on over 200 interviews with garment factory workers, unionists, private sector and other stakeholders, primarily focusing on industrial zones in the Yangon area, but also Pathein, Bago and Indagaw.
The report points to big flaws in labor legislation that restricts the freedom to join and form unions. "For factory owners, it is easy to ignore the decisions of the Arbitration Council," said Pyi Paing Ko Ko (aka) Ko Thit, Director of Let's Help Each Other, "Thus, ifafactory owner fires workers for joiningaunion, and the Arbitration Council orders the owner to rehire those workers, it is easier for that owner to simply ignore the decision and pay the low fine."
Given that over 90% of workers in Myanmar's garment industry are female, there is alsoapressing need to ensure that women's rights are better protected. Speaking at the report launch, Ma Thwel Zin Toe, Coordinator of Networking and Alliance Building Program of Burmese Women's Union stated, "Many women are not able to take maternity leave, even though it is prescribed by law. Furthermore, for many of these female workers, if they are forced to work overtime as is often the case, walking home late in the evening through dangerous areas means they are vulnerable to sexual harassment and violence."
"Given these structural pressures, it is imperative that the Government amends legislation and implementsapeople-centred labor policy that is robust enough to protect the factory workers. At this critical juncture in Myanmar's reintegration into the world, the garment industry can playakey role in beingamodel for sustainability, but it must also fit intoabroader, more equitable economic development of the country." said Aung Khaing Min, Interim Coordinator of Progressive Voice.
Ko Aung Khaing Min, Interim Coordinator, Progressive Voice: +95 (0) 926 100 9995, akm@progressive-voice.org (Myanmar/English)
Ko Thurein Aung, Coordinator, Action Labor Rights: +95 (0) 942 530 6037,